KROSSMASTER အခမဲ့ DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
အမျိုးအစားရဆက်နွယ်မှု, ဒါပေမယ့် tools များတဲ့နေရာမှာမတူညီတဲ့အစုအမျိုးမျိုးနှင့်အတူမသာ, အသုံးပြုသူများသည်တစ်ဦးအသိုင်းအဝိုင်းကိုဖန်တီးရန်ခွင့်ပြု VKontakte လူမှုကွန်ယက်။ ကျနော်တို့အသေးစိတ်အတွက်ဆောင်းပါးအတွင်းတတ်နိုင်သမျှရှင်းပြရကြလိမ့်မည်ကဲ့သို့သောခြားနားချက်ဒီလိုမျိုးအဘို့, လူထုများ၏တာဝန်ရှိအမျိုးအစားဖြစ်ပါတယ်။
ထိုခဏခြင်းတွင်ကျနော်တို့နှစ်ခုမျိုးစိတ် VKontakte လူမှုအသိုင်းအဝိုင်းအကြားခြားနားချက်များအချင်းချင်းဆက်စပ်မဟုတ်အများအပြားအရပ်တွင်ပေါ်ပေါက်နိုင်သည်ကိုသတိပြုပါ။ ထိုကြောင့်ကျနော်တို့ pablike အတွက်အချို့စာမျက်နှာများ၏သတ်မှတ်ရေးနှင့်အညီဆောင်းပါးကိုဝေဖန်လော့။
တချို့ကကဏ္ဍများနှင့်အပိုဆောင်း features တွေသာအခြို့သောလိုအပ်ချက်များကိုလျှင်ဝင်ရောက်နိုင်ပါတယ်။ ဒီသတိရပါ!
အပြင်အထက်မှကဖြစ်နိုင်ခြေသတိထားဖြစ်အုပ်စုပိုင်ရှင်တစ်ဦးအများပြည်သူစာမျက်နှာသို့လှည့်နိုင်သည့်ကျေးဇူးတင်အရေးကြီးပါသည်။ ၏သင်တန်း, ဒီအင်္ဂါရပ်ကိုသင် PUBLIC အုပ်စုတစ်စုပြောင်းပြောင်းပြန်နိုင်ရန်အတွက်သုံးနိုင်တယ်။
သင်အသိုင်းအဝိုင်းရဲ့မျိုးစိတ်ကိုပြောင်းလဲလိုလျှင်အချို့ပစ္စည်းများကြောင့်ပုံမှန်ကွဲပြားမှုမှဝှက်ထားသောနိုင်ပါသည်။ ဤလုပ်ဆောင်ချက်သည်ရက်ပေါင်း 30 အဘို့မြို့အနီးမှာရှိတဲ့ထပ်ခါတလဲလဲမရနိုင်ပါ။
သငျသညျခန့်မှန်းစေခြင်းငှါ, အမျှအများဆုံးမြင်နိုင်ပေမယ့်အစားအမြင်အာရုံကွဲပြားခြားနားမှုရပ်ရွာ home page ကိုပြောင်းလဲဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါထုတ်ဝေ၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုဖြစ်သော်လည်းထိုသို့နီးပါးမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိပါတယ် Entries တွေကိုရှုမြင်, ရပ်ရွာအမျိုးအစားများကိုတစျဦး၏ရုပ်ဆင်းသဏ္ဌာန်အုပ်စုများ၏ဖန်ဆင်းရှင်အဖြစ်, သင်ရှုပ်ထွေးစေပါတယ်နိုင်ပါတယ်။
ပထမဦးဆုံးနှင့်အထင်ရှားဆုံးခြားနားချက်အများပြည်သူယေဘုယျသတင်းအချက်အလက်ညွှန်ပြအခွင့်အရေးများစာမျက်နှာပေးရန်ပါဘူးဆိုတာပါပဲ။ အဆိုပါအုပ်စုတွင်အများအပြား menu ကို tabs များဖန်တီးရန်ဖြစ်နိုင်ခြေရှိလြှငျထိုမှတပါး, ထို့နောက်တစ်ဦးတည်းသာ fixation ဖို့ကန့်သတ် pablike ဖြစ်ပါတယ်။
တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်ဖန်တီးသူ parameters တွေကို၏အဓိကစာရင်းကနေတဆင့်ကိုယ့်ကိုကိုယ်သတ်မှတ်ထားနိုင်သည့်အများပြည်သူ၏မှတ်ပုံတင်ရက်စွဲဖြစ်ပါသည်။
အသုံးပြုသူ pablike အကောင့်စီမံခန့်ခွဲမှု Menu ထဲမှာ, ဖြစ်နိုင်ခြေ၏စံအကွာအဝေးအပြင်တစ်ဦးအပိုဆောင်းအပိုင်းပေးအပ် "Advertise".
created ကို item "Advertise" ဖန်တီးသူတစ်ဦးအမြင်ဖြင့်ပြည်တွင်းရေးကုန်သွယ်ပလက်ဖောင်းထိန်းချုပ်ထား, မြို့ရိုးအကြော်ငြာများအပေါ်ထားရှိနိုငျသညျ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: VC ကို advertise လုပ်နည်း
အများပြည်သူဆာဗာအုပ်စုအကြားအဓိကကွဲပြားခြားနားချက်တစ်ခုမှာထုတ်ဝေအကောင့် display ကိုလက်မှတ်ပေါင်းပြင်ဆင်ပြီးဖြစ်ပါသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ VC ကိုအုပ်စုတစ်ခု entry ကို add ဖို့ကိုဘယ်လို
သင်တို့ရှိသမျှသည်ဖြစ်နိုင်ချေကဏ္ဍများအုပ်စုများပါဝင်ပတ်သက်ခဲ့ကြရှိပါကပစ္စည်း main menu ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုမှာစတင်မိတ်ဆက်လိမ့်မည် "တစ်ဦးစာရွက်စာတမ်း Add".
ထရံအခြားဒြပ်စင်ရပ်ရွာ, မသက်ဆိုင်အမျိုးအစား, အစဉ်မပြတ်အချင်းချင်းတူညီကြလိမ့်မည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: လူ့ကယ်ဖို့ link တစ်ခုပေါင်းထည့်နည်း
အခြေခံတစ်ခုလုံးကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံနှင့်အမြင်အာရုံကွဲပြားခြားနားမှုဆက်ဆံဘဲလျက်, သင်အခြေစိုက်စခန်းအသိုင်းအဝိုင်း setting များကိုအတူကဏ္ဍများ၏ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဖို့ဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
"Settings" ကို tab ကို
သတ်မှတ်ချက်စာမျက်နှာနှင့်အတူပါဆုံးကတခြားကဏ္ဍများနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ "Settings" ကို ဒါဟာကွဲပြားခြားနားမှုတစ်ခုအလွန်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကရှိပါတယ်။ သို့သျောလညျးကိုတောင်ဒီအခြေအနေမှာအနည်းငယ်မှတ်သားဖွယ်အသေးစိတ်ကိုနေဆဲရှိသေး၏။
tab ကို "Settings" ကို ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "အထွေထွေသတင်းအချက်အလက်" အုပ်စုတစုကိုတည်းဖြတ်၏အမှု၌, သင်ကတခြားအမှုအရာတို့တွင်အက၎င်း၏ type ကို configure လုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒီအသိုင်းအဝုိင်းမှကျေးဇူးတင်ပါသည်ပွင့်လင်းလုပျနိုငျသညျ, closed သို့မဟုတ်ပုဂ္ဂလိက။
သငျသညျခန့်မှန်းမယ်အဖြစ်အများပြည်သူစာမျက်နှာတွင်, ဤ option ကိုပစ္စုပ္ပန်မဟုတ်ပါဘူး။ ထိုကြောင့်အဘယ်သူမျှမကိစ္စအများပြည်သူ၏အခြားကဏ္ဍများကို set up ဘယ်လို site ၏ VKontakte အသုံးပြုသူများအတွက်လူသိရှင်ကြားဆက်လက်ရှိနေပါမည်။
ပိတ်ပင်တားဆီးမှုအတွက် "နောက်ထပ်သတင်းအချက်အလက်" အမျိုးအစားတွေနဲ့ရပ်ရွာထဲတွင် "အုပ်စု" အခြေခံ settings ကိုအပြင်၌, သငျသညျကိုသာတည်နေရာပြောင်းလဲနိုင်သည်။
ပြည်သူ့စာမျက်နှာကိုလည်းမွေးရက်စွဲနှင့်ကမ်းလှမ်းခဲ့သည်သတင်း setting ကိုသတ်မှတ်နိုင်စွမ်းပေးပါသည်။ ထို့အပွငျကလိုအပ်ချက်အပေါ်တွစ်တာမှသတင်းအချက်အလက်ချစုစည်းဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ VC ကိုအုပ်စုတစုကိုတည်းဖြတ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ဒီအပိုင်းမှာ "Settings" ကို ဒါဟာပြီးစီးနိုင်ပါတယ်။
Tab ကို "အမျိုးအစားများ"
တကယ်တော့ဒီအသိုင်းအဝိုင်းရဲ့သတ်မှတ်ချက်ဘောင်နှင့်အတူစာမျက်နှာကဒီမှာသင်ဆန့်ကျင်အရေးကြီးသောလူမှုရေးနှင့်သတင်းအချက်အလက် element တွေကို enable သို့မဟုတ် disable နိုငျသောကွောငျ့, အဓိကဖြစ်ပါတယ်။ parameters များကိုအထူးသဖြင့်သိသာထင်ရှားသောအပိုင်းမဟုတ်ဘဲ PUBLIC ထက်, အုပ်စုတစုကိုတည်းဖြတ်၏ဖြစ်ရပ်၌ရှိကြ၏။
အဖွင့်စာမျက်နှာ "ကဏ္ဍများ" အုပ်စုတစုထဲမှာသင်အသိုင်းအဝိုင်း၏မြို့ရိုးပေါ်မှာအချို့သောလုပ်ကွက်များ၏ရရှိနိုင်မှုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ လိုအပ်သောလျှင်, သင်တင်ထားတဲ့၏တန်ဖိုး၏လုပ်ဆောင်နိုင်စွမ်းကိုကန့်သတ်နိုင်ပါတယ် "ကန့်သတ်"ထိုသို့သောအားဖြင့်မဆိုအထူးအခွင့်ထူးမရှိဘဲအားလုံးအသုံးပြုသူများအတွက်ယူနစ်ကိုပြောင်းလဲနိုင်စွမ်းပိတ်ဆို့ခြင်း။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ VC ကိုမြို့ရိုးကိုဖွင့်လှစ်ဖို့ကိုဘယ်လို
ပြည်သူ့ထိုကဲ့သို့သောဤကိစ္စတွင်ထဲမှာရှိသကဲ့သို့ settings ကို၏အနည်းငယ်ပြုပြင်ထားသောစာရင်းပေးထားသောကြောင့်နံရံမှဝင်ရောက်ခွင့်ပိတ်ဆို့နိုင်လိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ ထို့အပြင်ကအများပြည်သူစာမျက်နှာပေါ်တွင်ဝီကီ markup ၏ဖန်တီးမှုသော့ဖွင့်ဖို့ဆိုတာမဖြစ်နိုင်ဘူး။
အမြင်အာရုံနှင့်နည်းပညာပိုင်းပိတ်ပင်တားဆီးမှု "ကုန်စည်" အုပ်စုဒုတိယအမှု၌အဆက်အသွယ်သတ်မှတ်ဖို့လိုအပ်ချက် မှလွဲ. pablike အတွက်အလားတူအပိုင်းကနေစာသားမျှကွဲပြားခြားနားသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ VC ကိုအုပ်စုထုတ်ကုန် add လုပ်နည်း
စာမျက်နှာပေါ်တွင် "ကဏ္ဍများ" ဒါဟာသင်မြို့ရိုးကိုတစ်ဦးအထူးသဖြင့် mediarazdel စေရန်ခွင့်ပြုပါတယ်။ ဤသည် parameter သည်အဘယ်သူမျှမကွာခြားချက်ရှိပြီးအဆိုပါ tab ကိုရဲ့အစမှာကို unlocked လုပ်ကွက်၏ရွေးချယ်ထားအကွာအဝေးပေါ်တွင်မူတည်သည်။
ဤအ parameters တွေကိုအပိုင်းကိုင်တွယ်ဖြေရှင်းတော်မူပြီးမှ, သငျသညျနောက်တစ်နေ့မှဆက်လက်ဆောင်ရွက်နိုင်ပါ။
Tab ကို "မှတ်ချက်"
ဒီအစီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုအပိုင်းသူ့ဟာသူတခြားအရာအကြား, အမှန်တကယ်အသိုင်းအဝိုင်းအမျိုးအစားပေါ် မူတည်. အမျိုးမျိုးကွဲပြားပါဘူးအရာ, parameters တွေကို, တစ်ဦးအလွန်သေးငယ်တဲ့အရေအတွက်ကပေးပါသည်။
အုပ်စုတစ်စု၏အမှု၌, သင်သုံးနိုငျ "Filter ကိုမှတ်ချက်"အများပြည်သူ၏မူဘောင်အတွင်းအသုံးပြုသူအပြန်အလှန်အတွက်မလိုအပ်သောကွမျးတမျးဖယ်ရှားပစ်ရရန်။
သငျသညျရိုးရိုးသင့်လျော်သော setting များကို item ကိုအသုံးပြုခြင်းအားဖြင့်, အများပြည်သူမှတ်တမ်းများစာမျက်နှာပေါ်တွင်မှတ်ချက်များကို turn off နိုင်ပါတယ် "တုံ့ပြန်ချက်"။ အဆိုပါဖျာ filter ကိုနှင့် keyword ကို filter ကိုအပြည့်အဝခုနှစ်တွင်လည်းရရှိနိုင်ပါသည်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: မှတ်ချက်များ VK ပယ်ဖျက်ဖို့ကိုဘယ်လို
ခေါင်းစဉ်မှတ်ချက်ဒီ setting ကိုပိတ်ပင်တားဆီးမှုသာကွာခြားချက်ရှိပါသည်။
အခြေခံဒြပ်စင်အပြင်အများပြည်သူစာမျက်နှာအုပ်စုများအကြားကွဲပြားခြားနားမှု၏စုစုပေါင်းအရေအတွက်လည်းကွာခြားကြောင်းပစ္စုပ္ပန်နောက်ထပ်အသေးစိတ်အချက်အလက်များကိုဖြစ်ကြသည်။ ထိုအခါမကြာခဏဖော်ပြခဲ့တဲ့နောက်ထပ် features တွေအသိုင်းအဝိုင်းအသုံးပြုခြင်း၏လုပ်ငန်းစဉ်ကိုထိခိုက်မည်မဟုတ်ဆိုတာကိုသတိရ။
သငျသညျအုပ်စုအဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးသို့မဟုတ်တည်ထောင်သူများမှာလျှင်, သင် button ကိုနှိပ် "သင်ပါတီ" သငျသညျရှေးခယျြစရာနှင့်အတူတင်ပြပါလိမ့်မည်:
သတင်း Hide ။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: ငါဘယ်လို VC ကိုအုပ်စုများကနေနှုတ်ထွက်ကြပါ
အများပြည်သူစာမျက်နှာ၏အမှု၌, နှိပ်ပြီးနောက် "သင်လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့" ပစ္စည်းအကွာအဝေးအတန်ငယ်ကွဲပြားခြားနားသည်:
ဤကိစ္စတွင်အတွက်သော့ချက်ခြားနားချက်အမှတ်ဖြစ်ပါသည် "သတင်းစာရင်း", သင်ချက်ချင်း entry ကိုအပြီးအများပြည်သူ၏နံရံမှစာမူ၏ဖြန့်ဖြူးစိတ်ကြိုက်နိုင်ပါတယ်။
pablike အတွက်မြို့ရိုးအ၏အဓိကအကြောင်းအရာများကိုကြောင့်ဖြစ်နိုင်သည်အဖြစ်အမြဲတစ်ခုတည်း tab ကိုပေါ်တွင်တည်ရှိပြီးမည်ဖြစ်, "Entries အသိုင်းအဝိုင်း".
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ VC ကို၏မြို့ရိုးပေါ်မှာ entries တွေကိုတည်းဖြတ်ဖို့ကိုဘယ်လို
အပိုနဲ့အခြိနျပိုငျးမူလတန်း tab ကိုများအတွက်အသုံးပြုသူအုပ်စုအတွင်း "အားလုံးမှတ်တမ်းများ"ဒါကမသက်ဆိုင်ထုတ်ဝေအမျိုးအစားများ၏ရေးသားချက်များ sort ဖို့ခွင့်ပြုပါတယ်။
ကိုလည်းကြည့်ပါ: အ VC ကိုအုပ်စုကိုဖယ်ရှားပစ်ရန်ကဘယ်လို
ဤဆောင်းပါး၏ပြီးစီးကြောင့်ကျနော်တို့ထိခိုက်မည်သည့်လမ်းအတွက်မဟုတ်ကြပဲ setting များကိုအပေါငျးတို့သကဏ္ဍများကြောင်းနှင့်မသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါသည်, ရိုးရှင်းစွာနှစ်ဦးစလုံးမျိုးစိတ်အသိုင်းအဝိုင်းထဲမှာအချင်းချင်းတူညီကြသည်။ ဒါကဥပမာ, သစ်တစ်ခုဆွေးနွေးမှုအတွက်လုပ်ငန်းစဉ်ပင်ဖြစ်သည်သို့မဟုတ်အစာမကျြနှာပျေါတှငျ setting များကိုပြောင်းလဲပစ် "လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း၏မက်ဆေ့ခ်ျများ" ထပ်တူ။
တကယ်တော့ဤဆောင်းပါး၏လေ့လာမှု, သင်သည်မေးခွန်းများကိုအခက်အခဲရှိသည်, သို့မဟုတ်သင်ပစ္စည်းဖြည့်စွက်ဖို့တစ်ခုခုရှိပါက, မှတ်ချက်များမှတဆင့်သငျသညျနားထောငျဖို့အတှကျဝမျးသာဖြစ်လိမ့်မည်။ အကယ်.
ဗီဒီယို Watch: Krosmaster Arena Introducing6figurines - (နိုဝင်ဘာလ 2019).